Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Haweenka Ogadenya ee San Diego oo shir isugu yimid
Ururka Haweenka Ogadenya ee San Diego oo shir isugu yimid
Posted by ONA Admin	/ November 10, 2013
San Diego: Maalintii Sabtida ee 9 bisha October, 2013 ayaa waxaa shir muhiim ah isugu yimid Ururka Haweenka Ogadenia ee magaalada San Diego. Shirkan oo loogaga hadlayey xaaladaha guud ee Ogadenia ayaa waxaa khadka isgaadhsiinta ee la iska arko uga qaybgalay mudane Cabdiqadir Hirmooge (Cadaani) oo ka mid ah madaxda Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogadenia.
Mudane Caddaani ayaa ugu horeyn ka warbixiyey xaaladda guud ee shacbiga Ogadenia ku sugan yahay iyo tacadiyada joogtada ah ee uu gumeysiga Ethiopia ku hayo.
Dawladda Ethiopia ayaa sannaddadii u dambeeyey isku dayday iney xoog ku muquuniso shacbiga isla markaana guul darro kala kulan tahay. Taasoo sababtay iney xeelado cusub la yimaadaan sida mashruucyada cusub ee ay kawadaan aagaga Godey. Balse waxaa hubaal ah iney tanna ku guul dareysan doonaan sidii ay ugu guul dareysteen soosaaridda shidaalka.
Mudane Caddaani ayaa waxaa kale oo uu kahadlay dagaalada isdaba joogaha ee Ciidamada Waddaniga Xoreynta Ogadenia ku qaadeen bilihii udambeeyey ciidamada gumeysiga taasoo sabab u ah ayuu yidhi baxsadka faraha badan ee ciidamada Hawaariinta.
Waxaa xusid mudan in dawladda gumeysiga Ethiopia ay dhibaatooyin farabadan iyo gadood kala soo darseen qoomiyaadka ay gumeysato sida Gambela, Binshangul iyo Oromo iyaga oo raadinaya xaqooda aaya katashi waana sida kali ah ee shacbiga Ogadenia uga hoos bixi karo.
Ugu dambeyn ururka Haweenka Ogadenia ee San Diego oo ka mid ah ururada haweenka ugu cadcad ayaa ballan ku qaaday iney sii xoojin doonaan taageeridooda iyo sidii ay u garab istaagi lahaayeen shacabiga dulman ee Ogadenia.